जान्ने बुझ्नेहरुले बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरिरहेका छन् – Janaubhar
जान्ने बुझ्नेहरुले बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरिरहेका छन्
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१ | 201 Views ||
वीरबहादुर थापा (प्रमुख) जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, दाङ
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख विरबहादुर थापा जिल्लामा अशिक्षित भन्दा जान्ने बुझ्नेहरुबाट सवारी दुर्घटना भइरहेको बताउनुहुन्छ । कार्यालयले अहिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको सवारी दुर्घटनाको अवस्था, कारण, जोखिम कम गर्न गर्न थालिएको कदमलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर थापासँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक
दाङमा सवारी दुर्घटनाको अबस्था कस्तो छ ?
मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा दाङ सवारी दुर्घटनाको दृष्टिले जोखिम जिल्लामा पर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा १ सय ५७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । सवारी दुर्घटनामा परि ७४ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । दुर्घटनामा ३ सय १५ जनाको घाइते भएका थिए । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि दाङ सवारी दुर्घटनाका दृष्टिले जोखिम जिल्ला हो भनेर पुष्टि हुन्छ । हुन त विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न हामीले विशेष पहल गरिरहेका छौं । यसले पनि केही हदसम्म सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने छ । सवारी दुर्घटना अनपेक्षित हुने भएकाले यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न भने सकिदैन ।
दाङ किन जोखिमयुक्त जिल्ला भयो ?
दुर्घटना एउटा कारणले मात्र हुँदैन । यसमा विविध पक्षहरु समावेश भएका हुन्छन् । विशेषतः दाङमा राजमार्ग क्षेत्र बढी पर्छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चल्ने गाडीहरु दुर्घटना भए पनि जिल्लाको तथ्यांकमा देखिन्छ । दाङमा पूर्व धानखोलादेखि पश्चिम अमिलियासम्म ७४ किलोमिटर पर्दछ । त्यसैगरी शहरी इलाका पनि बढी भइरहेको छ । दुर्घटनाकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुल दुर्घटनामध्ये राजमार्ग क्षेत्रमा ३५ दशमलव ६६ प्रतिशत दुर्घटना भइरहेको छ ।
त्यसैगरी शहरी मार्गमा ५२ दशमलव ८७ प्रतिशत दुर्घटना भइरहेको छ । घोराही, तुलसीपुर, लमही, भालुवाङ, नारायणपुरलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समय शहरीकरण तीव्र रुपमा बढीरहेकाले पनि सवारी दुर्घटना बढेको हो । ग्रामीण मार्गमा ११ दशमलव ४७ प्रतिशत दुर्घटना भइरहेको छ । दुर्घटना संख्या कम भए पनि ग्रामीण मार्गमा भएका दुर्घटनाको क्षति भने बढी छ । गत वर्ष मात्र ग्रामीण मार्गमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि १८ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने ५९ जना घाइते भएका थिए । शहरी क्षेत्रमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि ३३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय ३१ जनाका घाइते भएका थिए । दाङ राप्तीकै केन्द्रबिन्दु भएकाले पनि यहाँ धेरै सवारी साधन गुडिरहेका छन् । यसले गर्दा सवारी दुर्घटना भइरहेको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा कुन–कुन कारणले बढी सवारी दुर्घटना भइरहेको छ ?
दाङमा सवारी चाप बढी भएकाले दुर्घटना पनि बढेको हो । त्यसैगरी तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चलनका कारण पनि सवारी दुर्घटना भइरहेको छ । शहरी क्षेत्रमा सडकको अवस्था निकै राम्रो छ । तर, दुर्घटना भइरहेको छ । राम्रो बाटोमा बढी गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै चालकको लापरबाही हो ।
त्यसैगरी ग्रामीण भेगमा सडकको अवस्था कमजोर भएकाले दुर्घटना भइरहेको छ । विशेषत मुर्कुटी, होलेरी तथा सल्यान जाने सडक साघुरो छन् । यी सडकमा चालक सचेत हुँदाहुँदै पनि दुर्घटना भइरहेको छ ।
राजमार्ग क्षेत्रमा भइरहेको सवारी दुर्घटना मध्ये ६३ प्रतिशत दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भइरहेको छ । समग्र जिल्लाको दुर्घटना अवस्था हेर्दा तीव्र गतिका कारण २९ दशमलव ९३ प्रतिशत दुर्घटना भएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर मोटर साइकल चलाउने प्रचलन अलि बढी छ । यसले पनि दुर्घटनालाई बढाएको छ । हामीले समग्र दुर्घटनालाई अध्ययन गरेका छौं । यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी चालकको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटना भएको छ । चालकको लापरबाहीका कारण ५६ दशमलव ६८ प्रतिशत दुर्घटना भएको छ ।
त्यसैगरी तीव्र गतिका कारण २९ दशमलव ९३, यात्रुको गल्तीका कारण १ दशमलव १८ प्रतिशत, ओभरलोडका कारण १ दशमलव ९१, यान्त्रिक गडबडीले ३ दशमलव ८२ र गलत ओभरटेकका कारण १ दशमलव ९१ प्रतिशत दुर्घटना भइरहेको छ । यसमध्ये धेरै दुर्घटना चालकसँग सम्बन्धित छन् ।
यो तथ्यांकलाई हेर्दा पनि कुल दुर्घटना मध्ये करीब ९० प्रतिशत मानवीय कारण अथवा चालकको लापरबाहीका कारण नै भएको छ ।
यसरी बढिरहेको दुर्घटना रोक्न तपाईहरुले के पहल थाल्नुभएको छ ?
हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपाय अबलम्बन गरेका छौं । ओभर स्पीड, मादक पदार्थको सेवन र सिक्दासिक्दै सवारी चलाउने प्रचलनले बढी दुर्घटना भइरहेको छ । त्यसैगरी सडकको अवस्थाका कारण पनि दुर्घटना भइरहेको छ । घोराही–लमही सडकखण्डअन्तर्गत मोसट खोलामा बढी दुर्घटना भइरहेको छ । बढी दुर्घटना भइरहेका ठाउँमा हामीले अलि बढी चासो देखाएका छौं । सडक बिग्रिएका ठाउँमा सडक विभागसँग समन्वय गरेर सडक सुधारको काम गर्न आग्रह गरेका छौं । मादक पदार्थबाट हुने सवारी दुर्घटना रोक्न आधुनिक उपकरणबाट चेकजाँच भइरहेको छ ।
अहिले नगरपालिकाभित्र नौ स्थानमा प्रत्येक दिन मापसे चेक भइरहेको छ । तुलसीपुर, लमही, भालुवाङलगायतका शहरी क्षेत्रमा बढी मापसे चेक भइरहेको छ । त्यसैगरी दिउँसोको समयमा ट्राफिक चेकिङ भइरहेको छ । अहिले स्पिड मिटरमार्फत् स्पीड न्यून गर्न राडार गन प्रयोग गरेर चेकजाँच भइरहेको छ । त्यसैगरी ट्राफिकको अगाडि अनुशासनको पालना गर्ने तर बाहिर लापरबाही गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न सादा पोसाकमा चेकिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि चेकिङ गर्न जानेहरुलाई क्यामरा उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरुले स्थलगत रुपमा कारबाही नगरे पनि त्यसको रिपोर्ट ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा बुझाउँछन् । रिपोर्टका कारण नम्बर पहिचान गरेर कारबाही गरिन्छ ।
तपाईहरुलाई काम गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
हामी राष्ट्रसेवक हौं । जस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा आन्तरिक समस्याहर धेरै होलान् तर, ती समस्याका कारण काम गर्न सकेनौं भनेर पन्छिन मिल्दैन । जनशक्तिको कमी छ । दाङमा अहिले २५ हजारभन्दा बढी ठूला तथा साना सवारी साधन छन् । तर हामी ४४ जना मात्र ट्राफिक प्रहरी छौं । जिल्लाका ९ सय ३७ किलोमिटर सडकखण्डमा अहिले सवारी चलिहेका छन् । यसलाई हेर्दा एउटा ट्राफिकले ६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी भौतिक साधनको कमी छ । तर, हामीले यही जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरेर अधिकतम सर्तकता अपनाइरहेका छौं ।
दुर्घटना कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मुख्य गरेर सडक, सवारी र चालक जिम्मेवार छन् । यी तीन पक्षको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सवारी साधन ठीक हुनुपर्छ । सडकको अवस्था राम्रो हुनपर्छ । दक्ष तथा सचेत चालक हुनुपर्छ । त्यस्तै यात्रु र कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय पनि सचेत हुनुपर्छ । यी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको अवस्थामा सवारी दुर्घटना रोक्न सकिन्छ ।
तपाईहरुले सवारी दुर्घटना रोक्न सचेतनातर्फ कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?
हामी सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्छौं । सवारी चालकहरुलाई समय–समयमा सचेतना तालिम दिइन्छ । दुर्घटना बढी सचेत मान्छेहरुबाटै भइरहेको छ । पढे लेखेका र जान्ने बुझ्नेहरुले बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरिरहेका छन् । हामीले अहिले यातायात व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर चालक र परिचालकहरुलाई प्रशिक्षित गरिरहेका छन् । यात्रुहरु बढी सचेत हुनुपर्छ । नपढेका भन्दा पढेका यात्रुहरुले बढी ट्राफिक उल्लंघन गरेकाले उनीहरुलाई सचेतभन्दा कारवाही गर्नुपर्छ । अब जिल्लास्थित सबै सरोकारवालाहरुले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल थाल्नुपर्छ ।
Prevऋण प्रवाह सहज र सरल बनाए कृषिमा लगानी बढ्नेछ
Nextप्रश्नहरू | घनश्याम अस्तित्व